सानो लगानीका होटलहरु माथि राज्यबाट विभेद भएको हाेटल व्यवसायीहरूकाे दावी-Setoghar
सानो लगानीका होटलहरु माथि राज्यबाट विभेद भएको हाेटल व्यवसायीहरूकाे दावी
विस्तृत विवरण संघका अध्यक्ष शैलेस कार्कीसँगकाे यस अन्तरवार्तामा
काठमाडौं जिल्ला होटल व्यवसायी संघमा हाल काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ९ ओटा होटल संघहरु आवद्ध छन् । ती संघ अन्तरगतका सबै सदस्यहरु यस काठमाडौं जिल्ला होटल व्यवसायी संघ मातहत नै रहन्छन् । यी सबै होटलहरु रहने भएको कारण करिब २८ सय होटलहरु काठमाडौं जिल्ला होटल व्यवसायी संघमा सदस्यको रुपमा रहेका छन् । हाल यस संघको नेतृत्व शैलेस कार्कीले गरिरहनुभएको छ ।
शैलेस कार्की,, अध्यक्ष, काठमाडौं जिल्ला होटल व्यवसायी संघ
को हुन् शैलेस कार्की ?
हाल काठमाडौं जिल्ला होटल व्यवसायी संघ का अध्यक्ष रहनुभएका कार्की सामुदायिक प्रहरी सेवा समिति गंगबुका अध्यक्ष समेत रहनुभएका शैलेश कार्की होटल क्षेत्रमा हुने विकृति विसङ्गति घटाउनको निम्ति गंगबु देखि बसपार्क पुल सम्म सिसिटिभी जडान गरिसकेको बताउनुहुन्छ । ऊहाँ सिसिटिभी जडान कार्यको निम्ति संयोजक समेत हुनुहुन्छ । महिला उपकार समाज सुधार मञ्चमा सल्लाहकार, काठमाडौं होटल व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार, टोल सुधार समिति लगायतमा संलग्न कार्की आगामी दिनमा पनि आफ्नो सामाजिक गतिविधिहरुमा निरन्तर सक्रियता रहिरहने बताउनुहुन्छ ।
निरन्तर रुपमा सामाजिक गतिविधिहरुमा सक्रिय रहनुभएका ऊहाँ समाजलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले अघी बढ्नुभएको छ । समाज सभ्य बनाउनको निम्ति व्यक्तिगत तवरबाट नै पहल हुनुपर्ने ऊहाँ बताउनुहुन्छ । ऊहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अरुलाई सभ्यताको पाठ सिकाउनको निम्ति कम्तिमा आफ्नो घर सफा गर्नुपर्छ ।’
काठमाडौं जिल्ला होटल व्यवसायी संघ किन र कसरी स्थापना भएकाे हाे ? यस संघले के काम गर्छ ?पहिले होटल व्यवसायी महासंघ स्थापना भएको थियो । तर चितवन भेलाबाट पहिलेको महासंघको नेतृत्वप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको कारण ३१ ओटा जिल्लाका होटल व्यवसायीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत होटल व्यवसायी महासंघका क्रियाकलापहरुको असन्तुष्टि जनाएर बाहिरिनुपरेको थियो । त्यस पश्चात् काठमाडौं जिल्लाका होटल व्यवसायीहरुलाई मात्रै समेट्ने प्रयासले काठमाडौं जिल्ला होटल व्यवसायी संघको स्थापना गरिएको हो ।
त्रिभुवन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लगायतबाट आउने व्यक्तिहरु सहज तवरले आउनको निम्ति अहिले काठमाडौं जिल्ला होटल व्यवसायी संघले विशेष पहल गरेको छ । यसै भदौमा मात्रै प्रथम अधिवेशन सम्पन्न गरेको यस काठमाडौं जिल्ला होटल व्यवसायी संघमा नन् स्टार अन्तरगत पर्ने सामान्य देखि टुरिस्ट लेभल सम्मका होटलहरु समेटिएका छन् ।
अहिले होटल व्यवसायीहरु संस्थागत तवरले अघी बढेसँगै अहिले काठमाडौं उपत्यकामा हुने आपराधिक गतिविधिहरुमा समेत निकै कमी आएको कार्की दाबी गर्नुहुन्छ । संघको समेत विशेष पहलमा काठमाडौंका अधिकांश होटलहरु अहिले करको दायरामा आइसकेको र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भइ राज्यलाई समेत सहयोग गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पनि राज्य पक्षबाट भने आफूहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवाहरु प्राप्त हुन नसकेको काठमाडौं जिल्ला होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष सैलेश कार्कीको गुनासो छ ।
अहिले घरबेटी र व्यवसायीबीच हुने असमझदारीहरुमा पनि मध्यस्थकर्ताको रुपमा काम गर्दै आएको छ । जसले गर्दा यस्ता झगडाहरुमा समेत निकै कमी आएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला होटल व्यवसायी संघले गर्दै आएका अन्य प्रयाशहरु के छन् ?
काठमाडौं जिल्ला होटल व्यवसायी संघले यस क्षेत्रका व्यवसायी समस्याहरु समाधानको निम्ति प्रयाप्त पहल गरेको छ । व्यावसायिक हकहितको अलावा सामाजिक गतिविधिहरुमा पनि हामीले प्रयाप्त काम गरेका छौं ।
हामीले होटलको अनलाइन बुकिङ गर्ने, होटलको क्यागोराइज्ड गर्ने र सोही बमोजिम हाम्रा ग्राहकहरुलाई अनलाइनबाट नै होटलको छनौट गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नको निम्ति पनि हामी अघी बढेका छौं । होटललाई वर्गिकरण गरी मूल्यसूची पनि सोही बमोजिम नै तय गर्ने लगायतका कार्यहरु हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । होटल क्षेत्रलाई अझ थप व्यवस्थित गर्नको निम्ति गर्नुपर्ने सबै कामको शुरुवात हामीले प्राथमिकताको आधारमा गर्नेछौं ।
पछिल्लो समय स्तरीय होटल निर्माण तथा सञ्चालन तर्फ ठूलो लगानी आकर्षित भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
अहिले होटल क्षेत्रमा जसरी लगानी बढेको छ, यसलाई निकै सकारात्मक दृष्टिले हेर्नु जरुरी छ । नेपालका युवाहरु अधिकांश विदेशमा गएर फर्केसँगै नेपालमा नै राम्रो अवसरको खोजीको क्रममा नेपालमा पर्यटन क्षेत्रलाई उपयुक्त क्षेत्रको रुपमा लिने र सोही बमोजिम पर्यटन अन्तरगत पर्ने होटल क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गरेको पाइन्छ । यस मध्येको एउटा क्षेत्र होटल पनि हो । नेपालमा पर्यटनको निम्ति प्रयाप्त सम्भावनाहरु छन् । अहिले जसरी निजी लगानीमा नेपाली युवाहरु पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षित भएका छन्, त्यसरी नै नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा राज्य पक्षबाट पनि सहयोग हुनु जरुरी छ । यसो हुन सकेको खण्डमा नेपालमा पर्यटन क्षेत्र निकै नै फस्टाउन सक्छ । सँगसँगै नेपालमा स्तरीय होटलहरुको पनि बजार सम्भावना राम्रो छ ।
बिना स्टारका मध्यम वर्गिय होटलहरुलाई राज्य पक्षबाट कस्तो सहयोग प्राप्त भएको छ ?
अहिले नेपालमा पर्यटन तथा होटल क्षेत्रको निम्ति हामी जस्ता मध्यम र निम्न होटललाई जुन रुपमा महत्व दिनुपर्ने हो, त्यो महत्व दिन सकेको हामीले पाएका छैनौं । नेपालमा अहिले साना तथा नन् स्टार होटलले रोजगारी सृजना, कर संकलन तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको निम्ति निकै ठूलो भूमीका निर्वाह गर्दै आएको छ । जुन कुरा राज्य संयन्त्रले बुझ्नु आवश्यक छ ।
अहिले राज्य कोषबाट पर्यटन प्रवद्र्धनको निम्ति विनियोजन हुने रकम स्टार होटल, टान, नाट्टा लगायतको निम्ति नै जाने गरेको छ । राज्यले साना होटललाई सम्बोधन गर्नको निम्ति विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी छ ।
होटल क्षेत्रमा अहिले के–कस्ता समस्याहरु छन् ?
विभिन्न आपराधिक गतिविधिहरुमा संलग्न व्यक्तिहरु पनि होटलकै आश्रय लिएर आफ्ना विभिन्न गतिविधिहरुमा संलग्न रहेका हुन्छन् । होटलमा अवैधानिक गतिविधिहरु, वेश्यावृत्ति, आत्म हत्या लगायत समेत हुने गरेको पाइन्छ ।
होटलमा हुने अवैधानिक यौनधन्दालाई कमी गर्नको निम्ति नेपालमा रेडलाइट एरियाको माग समेत हुँदै आएको छ । सबै कुराहरुको अध्ययन गरेर आवश्यक देखिएमा त्यसको निम्ति निश्चित मापदण्डहरु तोकेर सोही बमोजिम कुनै निश्चित क्षेत्रलाई रेडलाइट एरियाको रुपमा घोषणा गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ ।
होटलमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई दक्षता विकासको निम्ति तालिम दिनु कत्तिको आवश्यक रहन्छ ?
अहिले नेपालमा सामान्य तवरले सञ्चालनमा रहेका होटलहरुले राम्रो स्तरीय सेवा दिन नसक्नुमा कर्मचारीलाई राम्रो तालिम तथा प्रशिक्षण दिन नसक्नु पनि एक हो । यसैकारण होटलमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरुलाई समयानुकुल क्षमता विस्तारको निम्ति पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
होटलमा हुन सक्ने आपराधिक गतिविधिहरुलाई कमी गर्नको निम्ति तपाईंहरुले के–कस्ता पहलहरु गर्नुभएको छ ?
अहिले हामीले काठमाडौंका होटलहरुमा प्रहरी प्रशासनबाट स्वीकृत फम्र्याट बमोजिमको इन्ट्री बुक उपलब्ध गराई इन्ट्री गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । इन्ट्रीको साथसाथै सम्बन्धित व्यक्तिको परिचय पत्र पनि अनिवार्य चाहिने व्यवस्था हामीले गरेका छौं । अधिकांश होटलहरुमा सिसिटिभी पनि जडान गरिएको छ । यसले गर्दा अहिले विगतको तुलनामा आपराधिक घटनाहरुमा निकै नै कमी आएको छ ।
शुरुमा प्रवेश गर्दा कुन ग्राहक कस्तो मनोकांक्षाले होटलमा आएको छ भन्ने कुरा होटल व्यवसायीलाई थाहा हुँदैन । यद्यपि उक्त व्यक्तिमा कुनै शंकास्पद गतिविधि वा क्रियाकलापहरु देखिए होटलमा बास नदिने वा प्रहरीलाई खबर गर्ने लगायतका कार्य समेत गर्दै आएका छौं ।
सिसिटिभी कत्तिको प्रभावकारी भएको छ ?
अहिले हरेक जसो होटल क्षेत्रमा ‘तपाई सिसिटिभीको निगरानीमा हुनुहुन्छ’ भन्ने सन्देश टाँसिएको हुन्छ । अधिकांश होटलहरुले आफ्नो क्षमता बमोजिम सिसिटिभी जडान गरि पनि रहनुभएको छ । यद्यपि होटलमा इन्ट्रीको क्रममा हाम्रो गतिविधिहरु बुझेर पनि होटलमा हुने उच्छुङ्खल गतिविधि बारे ग्राहक पहिले नै सचेत हुने गरेको हामीले पाएका छौं । यसमा मनोवैज्ञानिक प्रभावले समेत उच्छृङ्खल गतिविधि न्यूनिकरणमा केही सहयोग मिलेको हामीले महसुस गरेका छौं । तर कुनै व्यक्ति वा समूह पूर्वनिर्धारित रुपमा कुनै योजना सहित आएको खण्डमा भने हामीले नियन्त्रण गर्न चाहेर पनि त्यस्ता घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।
अन्त्यमा तपाईंले भन्नुपर्ने कुराहरु के छन् ?
कुनै पनि व्यवसायले राज्यलाई दिएको कर तथा त्यस क्षेत्रबाट सृजना भएको रोजगारीलाई राज्यले पनि ख्याल गर्नु आवश्यक छ । राज्यबाट हामीलाई पनि सोही बमोजिम सुविधाहरु प्रदान गर्नु जरुरी रहन्छ । हाम्रा नन् स्टार होटलले पनि नेपालमा अर्थतन्त्र विकासको निम्ति पु¥याएको योगदान निकै महत्वपूर्ण छ । यसलाई कम आँक्न मिल्दैन ।